Metrobus လမ်းကြောင်း RayHaber | raillynews
IMM သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဆောင်းရာသီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက metrobus လိုင်းတွင်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ခရီးစဉ်များတိုးပွားလာသည်။ အထွတ်အထိပ်နာရီအတွင်းဘူတာသို့ပျမ်းမျှယာဉ်အစီး ၂၀ ရောက်လာသည်။ အသစ်အဟောင်းများအစားထိုးဘတ်စ်ကားအသစ် 20 [ပို ... ]
IETT နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော6တစ်သောင်း 154 ယာဉ်များသည်ဆောင်းရာသီတာယာများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ရေဖျန်းဆေးများကိုစစ်ဆေးပြီး wiper ရေတွင်အအေးခဲခြင်းကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ မော်တော်ယာဉ်များအတွက်အပူစနစ်များကိုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ ခေါက်စနစ်များအတွက်မတရားသောသူနှင့် [ပို ... ]
ထောင်ပေါင်းများစွာသော6882 ဝန်ထမ်းများနှင့် 373 ယာဉ်ထောင်ပေါင်းများစွာသည်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိဘဝပြတ်တောက်မှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ကူညီလိမ့်မည်။ 60 ၏အရေးပါသောအချက်ကို BEUS စနစ်ဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်ပြီးမတော်တဆမှုများကိုကာကွယ်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ် [ပို ... ]
Metrobus လိုင်း၏သိပ်သည်းဆဖြစ်သော Istanbul ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အသက်သွေးကြောကို Istanbul Metropolitan Municipality Assembly ၏အစီအစဉ်သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်။ Altunizade မှတ်တိုင်ကိုအသုံးပြုပြီးခရီးသည်အရေအတွက်တိုးလာသည်။ SözcüOzlem Guvemli'nin ၏အစီရင်ခံစာအရ, Milyonlar သန်းပေါင်းများစွာအစ္စတန်ဘူလ်ရှိတိုက်ကြီးနှစ်ခုအကြား [ပို ... ]
မတော်တဆမှုအောင်ကာကွယ်နိုင်မလုံခြုံသောယာဉ်မောင်းများနှင့် Metrobus ပေးပို့စနစ်များစနစ်
ယာဉ်မောင်းဆက်စပ်စမ်းသပ်၏နောက်ဆုံးအဆင့်ကြိုတင်သတိပေး "ကို Safe ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပေးပို့စနစ်များစနစ်များ" ပေးခြင်း IETT ။ စနစ်နှင့် တွဲဖက်. နှင့်ချွတ်-သွေးဆောင်မတော်တဆမှုချိုးဖောက်မှုများတားဆီးဖို့အသုံးပြုခံရဖို့လမ်းကြောင်းကနေ Metrobus လမ်းကြောင်း။ [ပို ... ]
သတိပေးချက်အပေါ် DCC န်ထမ်းများနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ထောင်နှင့်ချီသော!
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံ၏အနောက်ပိုင်းဒေသများအထူးသဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်သည်နံနက်ခင်းများမှ စ၍ အအေးနှင့်မိုးရာသီ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိသည်။ စနစ်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်, လေထုအပူချိန် 8-10 ဒီဂရီအားဖြင့် -1 မှ2ဒီဂရီအားဖြင့်လျော့နည်းစေသည်။ [ပို ... ]
Metrobus လမ်းကြောင်းကနေ Flexible အတားအဆီးမှ IMM
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အတွက် Metrobus လမ်းကြောင်းအတားအဆီးမှာထပ်စည်းရုံးရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုငျကယျသမားအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏တောင်းဆိုချက်များကိုအကဲဖြတ်ပုံမှန်အတားအဆီးထက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြတ်တောက်တားဆီးအသစ်နှင့်ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတားအဆီးများ၏ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
drivers သတိပြုပါ! နှင်းအစ္စတန်ဘူလ်မှကြွလာ
မိုးလေ ၀ သနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနမှရရှိသောအချက်အလက်များအရယနေ့ခေတ်တွင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးညနေခင်းအထိမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း (မနက်ဖြန်) မနက်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ မနက်ပိုင်းအပူချိန်မြင့်မားသည့်ဒေသများရှိ4° C မှအပူချိန်များ [ပို ... ]
Duty ၏ကြောပိတ်ဆို့မှုကို7/ 24 ရှောင်ရှားရန် IMM
ဆောင်းရာသီအခြေအနေကိုတိုက်ဖျက်ရန်နယ်သာလန် Istanbul Metropolitan Municipality မှလိုအပ်သောအစီအမံများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ IMM Disaster Coordination Centre (AKOM) ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်7bin 83 ၀ န်ထမ်းများနှင့် 1.357 မော်တော်ယာဉ်များကိုအစ္စတန်ဘူလ်မြို့ရှိနေထိုင်သူများအတွက်အဆင်ပြေသောဆောင်းရာသီတွင်နေထိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ် OK ကိုအတွက်ဆောင်းရာသီကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့လာရေး
Istanbul Metropolitan Municipality သည်ဆောင်းရာသီအခြေအနေကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆောင်းရာသီကိုတိုက်ဖျက်ရန်အားထုတ်မှုများကို IMM Disaster Coordination Centre (AKOM) မှညှိနှိုင်းသည်။7တစ်သောင်း 83 ဝန်ထမ်းများနှင့်တစ်ထောင် 357 မော်တော်ယာဉ်များ [ပို ... ]
Istanbul Metropolitan Municipality ဆောင်းရာသီအခြေအနေများနှင့်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲ၏နယ်ပယ်အတွင်းဆောင်းတွင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ညှိနှိုင်းမှုစင်တာကိုအစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပသည့်အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆောင်းရာသီကိုချောချောမွေ့မွေ့စွာသုံးရန် Istanbul Metropolitan Municipality [ပို ... ]
မြို့တော်ဝန် Topbas, ငါတို့ Metrobus လမ်းကြောင်းအောက်မှာမက်ထရိုစီမံကိန်းရှိသည်: Istanbul မြို့ပြမြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Topbas က Metrobus လမ်းကြောင်းအောက်တွင်မက်ထရိုစီမံကိန်းများရှိပြီးတင်ဒါကျင်းပလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Istanbul Metropolitan Municipality မှမြို့တော်ဝန် Kadir Topbaş, [ပို ... ]
မနာလိုဤမျှလောက် ... | Marmaray
ဒါဟာမနာလိုမှုပဲ…ကျွန်တော်တို့ဟာတီထွင်မှုအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်၊ အချို့သောလူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်သိသာထင်ရှားသည့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုခုခံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ [ပို ... ]
Topbaş: လုပ်ခံရဖို့အစ္စတန်ဘူလ် 60 ဘီလီယံကိုပေါင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
Topbaş: အစ္စတန်ဘူလ် 60 ဘီလီယံကိုပေါင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆွဲဆောင်မှုများ: အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir, Metrobus လမ်းကြောင်းဧရာမြို့ပန်းခြံထဲကနေအစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်စီမံကိန်း၏အရေးပါသောရှင်းပြချက်အနာဂတ်မှာအပေါ်အစ္စတန်ဘူလ်၏မျက်နှာကိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]